BX - मध्यम
GXL - ठूलो
MXL - ताजामा ताजा
मिश्रण र ब्याचिंग
खुराक - KDP र GDP
इकोलोजिक ब्लक उत्पादन
Gervasi Italia SPA को लागि गोपनीयता नीति
Gervasi रोबोटिक्स मा, https://www.gervasi.eu बाट पहुँचयोग्य, हाम्रो मुख्य प्राथमिकताहरू मध्ये एक हाम्रा आगन्तुकहरूको गोपनीयता हो। यो गोपनीयता नीति कागजातमा Gervasi रोबोटिक्स द्वारा सङ्कलन र रेकर्ड गरिएको जानकारी र हामीले यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने जानकारी समावेश गर्दछ।
यदि तपाईंसँग अतिरिक्त प्रश्नहरू छन् वा हाम्रो गोपनीयता नीति बारे अधिक जानकारी आवश्यक छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
यो गोपनीयता नीति हाम्रो अनलाइन गतिविधिहरूमा मात्र लागू हुन्छ र हाम्रो वेबसाइटमा आगन्तुकहरूका लागि उनीहरूले साझा गरेको र/वा Gervasi रोबोटिक्समा सङ्कलन गरेको जानकारीको सन्दर्भमा मान्य छ। यो नीति यस वेबसाइट बाहेक अफलाइन वा च्यानलहरू मार्फत सङ्कलन गरिएको कुनै पनि जानकारीमा लागू हुँदैन। हाम्रो गोपनीयता नीति को सहयोग संग सिर्जना गरिएको थियो नि: शुल्क गोपनीयता नीति जेनरेटर.
हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाईंले हाम्रो गोपनीयता नीतिको सहमति लिनु भएको छ र यसको सर्तहरूसँग सहमत हुनुहुन्छ।
हामीले सङ्कलन गर्ने जानकारी
तपाइँलाई उपलब्ध गराउन सोधेको व्यक्तिगत जानकारी, र तपाइँले यसलाई प्रदान गर्न सोधेका कारणहरू, तपाइँले बिन्दुमा तपाइँलाई तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्न सोध्नुपर्नेछ।
यदि तपाईंले हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुभयो भने, हामी तपाईंको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछौं जस्तै तपाईंको नाम, ईमेल ठेगाना, फोन नम्बर, सन्देशको सामग्री र / वा एट्याचमेन्टहरू जुन तपाईं हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, र कुनै अन्य जानकारी तपाईंले प्रदान गर्न रोज्नुहुनेछ।
जब तपाईं खाताको लागि दर्ता गर्नुहुन्छ, हामी तपाईंको सम्पर्क जानकारी, नाम, कम्पनीको नाम, ठेगाना, ईमेल ठेगाना, र टेलिफोन नम्बर जस्ता आईटमहरू सहित सोध्न सक्छौं।
हामीले स collect्कलन गरेको जानकारीलाई हामीले विभिन्न तरिकामा प्रयोग गर्छौं, सहित:
हाम्रो वेबसाइट प्रदान गर्नुहोस्, अपरेट गर्नुहोस् र मर्मत गर्नुहोस्
सुधार गर्नुहोस्, निजीकृत गर्नुहोस्, र हाम्रो वेबसाइट विस्तार गर्नुहोस्
बुझ्नुहोस् र विश्लेषण गर्नुहोस् कसरी तपाईं हाम्रो वेबसाइट को उपयोग गर्नुहुन्छ
नयाँ उत्पादनहरू, सेवाहरू, सुविधाहरू, र कार्यक्षमता विकास गर्नुहोस्
तपाईंसँग कुराकानी गर्नुहोस्, या त सिधा वा हाम्रा साझेदारहरू मध्ये एक मार्फत, ग्राहक सेवाको लागि, तपाईंलाई वेबसाइटसँग सम्बन्धित अपडेटहरू र अन्य जानकारी प्रदान गर्न, र मार्केटि prom र प्रचार उद्देश्यहरूका लागि।
तपाईंलाई ईमेलहरू पठाउनुहोस्
खोज्नुहोस् र धोखाधडी रोक्नुहोस्
Gervasi रोबोटिक्सले लग फाइलहरू प्रयोग गर्ने मानक प्रक्रिया पछ्याउँछ। यी फाइलहरूले आगन्तुकहरू लगाउँछन् जब तिनीहरू वेबसाइटहरू भ्रमण गर्छन्। सबै होस्टिङ कम्पनीहरूले यो गर्छन् र होस्टिङ सेवाहरूको विश्लेषणको अंश हो। लग फाइलहरूद्वारा सङ्कलन गरिएको जानकारीमा इन्टरनेट प्रोटोकल (IP) ठेगानाहरू, ब्राउजरको प्रकार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP), मिति र समय स्ट्याम्प, सन्दर्भ/निकास पृष्ठहरू, र सम्भवतः क्लिकहरूको संख्या समावेश छ। यी व्यक्तिगत रूपमा पहिचान गर्न सकिने कुनै पनि जानकारीसँग जोडिएका छैनन्। जानकारीको उद्देश्य प्रवृतिहरूको विश्लेषण, साइट व्यवस्थापन, वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताहरूको आन्दोलन ट्र्याक गर्न, र जनसांख्यिकीय जानकारी सङ्कलन गर्न हो।
कुनै पनि अन्य वेबसाइट जस्तै, Gervasi रोबोटिक्स 'कुकीज' प्रयोग गर्दछ। यी कुकीहरू आगन्तुकहरूको प्राथमिकताहरू, र आगन्तुकले पहुँच गरेको वा भ्रमण गरेको वेबसाइटमा पृष्ठहरू सहित जानकारी भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ। जानकारी आगन्तुकहरूको ब्राउजर प्रकार र/वा अन्य जानकारीमा आधारित हाम्रो वेब पृष्ठ सामग्री अनुकूलन गरेर प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव अनुकूलन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कुकीहरूमा अधिक सामान्य जानकारीको लागि, कृपया पढ्नुहोस् कुकी सहमति वेबसाइटमा थप.
विज्ञापन साझेदार गोपनीयता नीतिहरू
Gervasi रोबोटिक्सका प्रत्येक विज्ञापन साझेदारहरूको गोपनीयता नीति फेला पार्न तपाईंले यो सूचीलाई परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट गर्नुहोस् कि Gervasi Robotics को तेस्रो-पक्ष विज्ञापनदाताहरूले प्रयोग गर्ने यी कुकीहरूमा पहुँच वा नियन्त्रण छैन।
Gervasi रोबोटिक्सको गोपनीयता नीति अन्य विज्ञापनदाता वा वेबसाइटहरूमा लागू हुँदैन। तसर्थ, हामी तपाईंलाई थप विस्तृत जानकारीको लागि यी तेस्रो-पक्ष विज्ञापन सर्भरहरूको सम्बन्धित गोपनीयता नीतिहरू परामर्श गर्न सल्लाह दिइरहेका छौं। यसमा तिनीहरूका अभ्यासहरू र निश्चित विकल्पहरूबाट कसरी अप्ट-आउट गर्ने भन्ने बारे निर्देशनहरू समावेश हुन सक्छन्।
तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत ब्राउजर विकल्पहरूको माध्यमबाट कुकिज असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ। विशिष्ट वेब ब्राउजरहरूको साथ कुकी व्यवस्थापनको बारेमा विस्तृत जानकारी जान्नको लागि, यो ब्राउजरको सम्बन्धित वेबसाइटहरूमा फेला पार्न सकिन्छ।
CCPA गोपनीयता अधिकार (मेरो व्यक्तिगत जानकारी बेच्न छैन)
सीसीपीए अन्तर्गत, अन्य अधिकारहरू बीच, क्यालिफोर्निया उपभोक्ताहरूको अधिकार छ:
अनुरोध गर्नुहोस् कि एक व्यवसाय जसले उपभोक्ताको व्यक्तिगत डेटा सlects्कलन गर्दछ कोटिहरू र व्यक्तिगत डेटाको विशेष टुक्रा खुलासा गर्दछ जुन व्यवसायले उपभोक्ताहरू बारे संकलन गरेको छ।
अनुरोध गर्नुहोस् कि व्यवसायले उपभोक्ताको बारेमा कुनै व्यक्तिगत डेटा हटाईयो जुन एक व्यवसायले स .्कलन गर्यो।
अनुरोध गर्नुहोस् कि यस्तो व्यवसाय जुन उपभोक्ताको व्यक्तिगत डाटा बेच्छ, उपभोक्ताको व्यक्तिगत डाटा बेच्दैन।
यदि तपाईंले अनुरोध गर्नुभयो भने, हामीसँग तपाईंलाई जवाफ दिन एक महिना छ। यदि तपाईं यी अधिकारहरू मध्ये कुनै पनि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
GDPR डाटा संरक्षण अधिकार
हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि तपाईं आफ्ना सबै डाटा सुरक्षा अधिकारहरू बारे पूर्ण ज्ञान हुनुहुन्छ। प्रत्येक प्रयोगकर्ता निम्नको हकदार छ:
पहुँच गर्न अधिकार - तपाईंसँग आफ्नो व्यक्तिगत डाटाको प्रतिलिपिहरू अनुरोध गर्ने अधिकार छ। हामी तपाईंलाई यो सेवा को लागी एक सानो शुल्क चार्ज गर्न सक्छौं।
सुधारको अधिकार - तपाईसँग अनुरोध गर्ने अधिकार छ कि हामी तपाईंलाई थाहा छ कुनै गलत जानकारी गलत सुधार्न सही गर्नुहोस्। तपाइँसँग अनुरोध गर्ने अधिकार पनि हामीसँग छ जुन तपाइँ विश्वास गर्नुहुने जानकारी अपूर्ण छ पूरा गर्नुहोस्।
मेटाउने अधिकार - तपाईसँग अनुरोध गर्ने अधिकार छ कि हामी तपाईंको व्यक्तिगत डाटा मेटाउन अनुरोध गर्दछौं, केही सर्तहरूको अन्तर्गत।
प्रशोधन प्रतिबन्धको अधिकार - तपाईसँग अनुरोध गर्ने अधिकार छ कि हामी तपाईंको व्यक्तिगत डाटाको प्रशोधनलाई केही सर्तहरूमा सीमित गर्दछौं।
प्रोसेसिंगमा आपत्ति जनाउने अधिकार - तपाइँसँग तपाइँको व्यक्तिगत डेटाको प्रशोधनमा आपत गर्ने अधिकार छ, केही सर्तहरूको अन्तर्गत।
डाटा पोर्टेबिलिटीको अधिकार - तपाईसँग अनुरोध गर्ने अधिकार छ कि हामी यो डेटा हस्तान्तरण गर्दछौं जुन हामीले अर्को स to्गठनमा स have्कलन गरेका छौं, वा सीधा तपाईंलाई केही सर्तहरूमा।
बच्चाहरु को जानकारी
Gervasi रोबोटिक्सले 13 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूबाट जानाजानी कुनै पनि व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारी सङ्कलन गर्दैन। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँको बच्चाले हाम्रो वेबसाइटमा यस प्रकारको जानकारी प्रदान गरेको छ भने, हामी तपाइँलाई तुरुन्तै हामीलाई सम्पर्क गर्न प्रोत्साहन दिन्छौं र हामी तुरुन्तै हाम्रो सक्दो प्रयास गर्नेछौं। हाम्रो रेकर्डबाट यस्तो जानकारी हटाउनुहोस्।
© २०२१ Gervasi इटालिया SPA
यो वेबसाइटले कुकीहरू प्रयोग गर्दछ र तपाइँको ब्राउजिङ अनुभव बृद्धि गर्न तपाइँको व्यक्तिगत डेटा सोध्छ।
ठीक छ, म सहमत छु गोपनीयता नीति